fadliga bisha barakaysan ee ramadaan | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
Posted by Liban Mukhtar Avobankz on September 7, 2008
Maalmuhu iyo billooyinkuba waxay soo laablaabtaan-ba waxaa foodda nagu soo haysa bishii kheyrka badneyd ee Ramadaan. Waa hubaal inuu yahay marti culus oo aad u qiimo badan. Waa munaasabad cibaadeed oo aad u weyn, oo uu Eebbe (sw) ku dhaafo denbiyada addoomada ay galaan, isla mar ahaantaana uu dhexdeeda ku kordhiyo abaalmarka iyo xasanaadka qofkii isaga muteysta maamuuskaas.
Walaalayaal, bal ina keena si aan innagoosi farxad leh ku qaabilayna bisha ramadaan aan dib ugu noqono taariikhdii maamuuska lahayd ee uu noolaa Xabiibka Rasuulka (scw), bal si aynu uga baranno qaabkii iyo waddadii uu Rasuulka (scw) iyo asxaabtuba ugu soo dhoweyn jireen bisha Ramadaan. Ugu horeyntiiba, wuxuu Rasuulka (scw)ugu bishaarayn jiray muslimiinta bilashada bisha ramadaan, dabadeedna isagoo ay weheliyaan ardaydiisii qiimaha badnaa ee asxaabta waxay dhammaan bishaas barakeysan ku cammiri jireyn cibaado fara badan oo kala duwan. Sida uu werinayo Imaamu Dhabari, wuxuu Rasuulka (scw) ahaa markay timaaddo bisha Rajab kii yiraahda “Alloow noo barakeey Rajab iyo Shacbaan, waxaadna na gaarsiisaa ramadaan-ka”.
Caa’isha Ilaahay ha ka raalli noqdee iyadoo noo iftiiminaysa siduu Nebiga (scw) ugu dadaali jiray salaatu-leylka waxay tiri “ha ka tagin salaadda leylka, maxaa yeelay ma uusan Rasuulka (scw) ka tagi jirin. Haddii uu xanuunsan yahay ama uu caajiso fadhiga ayuu ku tukan jiray”. Salaadahaas iyo dadaalkaas wuu sii laba-laabi jiray Rasuulka (scw) marka la gaaro ramadaanka, saxaabadana way kaga shidaal qaateen sunnadaas.
Cumar Binu Khadaab (rc) marka la gaaro habeenka wuxuu u istaagi jiray salaad, isagoo si ay khushuuc ku dheehan tahay u dheereen jiray salaadaha habeenka. Habeenka saqda dhexe marka la gaaro wuxuu salaadda u toosin jiray reerkiisa, isagoo ku oran jiray SALAADDA SALAADDA, wuxuuna ku dul aqrin jiray aayadda uu Alle (sw) ku leeyahay “waxaad qoyskaaga fartaa salaadda iyo zakada..”Suuradda Daha 132. Xaddiis uu weriyay Imaam Axmad, uuna ka werinayo Abuu Hureyra Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu Rasuulka (scw) yiri xaddiis macnihiisu ahaa: “waxaa idiin yimid bishii ramadaan, wuxuu Eebbe (sw) idinku waajibiyay inaad soontaan, bishaas waxaa la furaa albaabada Jannada, waxaa la xiraa albaabada Naarta, waxaa la xiraa shayaadiinta, waxaa ku jirta habeen ka kheyr badan ee leylatul qadar ruuxii laga xarimo kheyrkeeda waa qof kheyr laga xarimay”. Haddaba, bisha sidaas u kheyrka badan waxaa habboon inaynu ku dadaalno sidii aan uga faa’iideysan lahayn kheyraatkeeda, oo aan gadaal danbe aanan uga qoomamayn.
Walaalayaal, waxaa nalaga doonayaa inaynu bishaan kheyrka badan aan kula qaabilnotowbad badan, qur’aan aqris badan, salaad badan, baarifalka iyo samafalka waalidka, waxtarka iyo taageerada dadka dhibaataysan, islaaxinta iyo xiriirka qaraabada iyo dhammaan waddooyinka kheyrka ee uu Eebbe (sw) ka raalliga yahay. Bisha ramadaan waa bishii naxariista. Waa bishii denbi dhaafka badneyd. Waa bishii xoreynta naarta.Lama koobi karo fadliga bisha ramadaan, waxaana ka mid ah in la aqbalo ducada addoomada suubban ay baryayaan Rabbi (sw). Wuxuu Eebbe (sw) yiri isagoo ka hadlaya arrintan “hadduu addoonkayga xaggeyga wax iga weydiisto waxaan u ahay mid u dhow oo aqbala ducada markuu wax i weydiisanayo” aayadda 186 suuradda Al-Baqara. Dhinaca kale, xaddiis uu Imaam Axmad ka weriyay Rasuulka (scw) wuxuu Rasuulka (scw) yiri “seddex ducadooda lama celiyo”, waxayna saddexdaas kala yihiin: qofka sooman jeer uu ka afuro, madaxweynaha caadilka ah iyo qofka la dulmiyay habaarkiisa”.
Walaalayaal, sidoo kale, bisha ramadaan waa bil ku caanbaxsan deeqsinimada, samafalka iyo ixsaanka. Cabdullaahi Binu Cabbaas Ilaahay ha ka raalli noqdee wuxuu yiri “Rasuulka (scw) wuxuu ahaa kan dadka ugu deeqsinimada badan, wuxuuna ugu sii deeqsinimo badnaa bisha ramadaan, gaar ahaan waqtiga uu la kulmayo malaga Jibriil (cs), habeen kasta wuu la kulmi jiray Jibriil iyagoo daraasayn jiray qr’aanka”. Sidaa darteed, wuxuu Imaamu Shaafici yiri “waxaan jeclahay inuu qofka badiyo deeqsinimada si uu ugu daydo Rasuulka (scw). Dhinaca kale, wuxuu Rasuulka (scw) qur’aanka la daraasayn jiray oo la aqrin jiray Jibriil bisha ramadaan, waxay dhammeyn jireen qur’aanka bisha oo dhan hal jeer, hase ahaatee sannadkii ugu danbeeyay ee uu soomay Rasuulka(scw) waxay qur’aanka khatimeen labo jeer.
Bisha ramadaanka waxaa ku jira habeen ka kheyr badan , sida uu Eebbe (sw) noogu sheegay suuradda Al-qadr. Inkastoo aan habeenkaas la cayimin habeenka ay ku beegan tahay, haddana waxaa muslimiinta laga doonayaa inay ku dadaalaan dhammaan habeenada iyo maalmaha ramadaanka uu ka kooban yahay, si ay uga faa’iideystaan fadliga ramadaanka.
Irida dadka sooman ay ka galayaan
Walaalayaal, cibaadada Soonka wuxuu qofka dhaxalsiiyaa Jannada iyo inuu ka galo maalinta qiyaamaha mid ka mid ah albaabada Jannada, kaasoo loogu magacdaray Rayyaan. Saxaabiga la yiraahdo Sahal Binu Sacaad ayaa wuxuu Rasuulka (scw) ka weriyay isagoo leh “waxaa jannada dhexdeeda ahaaday irid la yiraahdo Rayyaan, iridkaas ayeey dadkii soomanaa ka soo galayaan maalinta qiyaamaha, qof aan iyaga ahayn kama soo galayo, waxaa la oranayaa aaway dadkii soomanaa?, markaas bay istaagaan qof aan iyaga ahayn ma soo galayo”.
Allaha ka raalli noqdee saxaabiga la yiraahdo Abii Umaama ayaa weydiiyay Rasuulka (scw), wuxuuna ku yiri “Rasuulkii Allow waxaad i fartaa arrin uu Alle igu anfacayo”, markaasuu Rasuulka (scw) wuxuu ugu jawaabay “waxaad ku dadaashaa soonka, ma jiraan wax la mid ah” Soonka iyo guulihii muslimiinta Lama koobi karo munaasabadada qiimaha leh ee Ramadaan. Bisha Ramadaan waa bilihii ay muslimiinta soo hoyeen guulihii ugu waaweynaa ee islaamka. Dagaalkii ugu weynaa ee ay muslimiinta ku guulaysteen wuxuu ahaa dagaalkii weynaa ee Badr, haddana dagaalkaasi wuxuu dhacay bil ramadaan 17-keedii sannadkii labaad ee hijriga. Waa dagaalkii ay qayb libaax leh ay ka qaateen malaa’igtii sharafta badnaa ee uu hoggaaminayay Jibriil (cs). Wuxuu Eebbe (sw) yiri isagoo ka hadlaya dagaalkaas “dhab ahaantii wuxuu Eebbe (sw) idiin gargaaray Badar idinkoo dulleysan..” aayadda 123 suuradda Al-Cimraan”.
walaalayaal waa in aan dhamanteen Allah (SW) ka barino in uu dunuubteena dhaafo. waxaa kaloo nagu waajib ah in aan wadankeena u duceeyno in Allah uu naga dulqaado dhibaatada ku habsatay umada Soolaamiyeed iyo dhaamaan umadaha Islaamka
← liibaan’s background
axkaanta soomida bisha ramadaan ee barakaysan →
One comment on “fadliga bisha barakaysan ee ramadaan”
Wilbert on January 15, 2015 at 9:02 pm said:
Do you have any video of that? I’d like to fknd out some additional information.